In kabadan 250 qaab joomatari oo weyn | Abuurista khadka tooska ah
Haddaan raadino qaababka joomatari waxaan heli karnaa boqolaal ama laga yaabee kumanaan, laakiin badankood waxay leeyihiin wax ay wadaagaan, waxay leeyihiin taabasho qaabka dib u noqoshada. Tani waa sababta oo ah waxay ku jirtay gudaha sano 50-60 goormaad noolaan kartaa kobcinta naqshadaha leh walxaha joomatari In kasta oo markii dambe ay jireen dhawr sano markii qaabkani ka maqnaa isbeddellada iyo moodooyinka, illaa 3 sano ayaa dib loo arkay meelo badan.
Intaa waxaa dheer, naqshadeeyayaasha sidoo kale waa la yaqaan la qabsada oo dib u qaabee naqshadaha gadaal u dhig qaabka ugu yar iyada oo aan dhinac loo dhaafin tirooyinka joomatari ahaan ee matalaya qaabkan laakiin lagu hagaajinayo baahida qayb ka mid ah macaamiisha hadda kuwaas oo laga yaabo inay jecel yihiin tirooyinkaas aadka u waaweyn ee leh midabada midabbada leh oo doorta wax aad u xeelad badan.
Waxaad arki kartaa faraqa u dhexeeya Retro-ga ugu caansan iyo la qabsiga xilligan xaadirka ah adigoo isbarbar dhigaya labada sawir ee maqaalkan. Intaa waxaa dheer, Naldz Graphics waxay diyaariyeen iskudhaf weyn oo ka badan 250 qaab joomatari bilaash ah oo aad soo dejisan karto si aad ugu adeegsato nashqadahaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maamulayaasha » In kabadan 250 qaabab joomatari oo weyn